बाढी-पहिरोको बितण्डा: मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुग्यो,आठ जना बेपत्ता - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बाढी-पहिरोको बितण्डा: मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुग्यो,आठ जना बेपत्ता
काठमाडौं । अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा परी प्रदेश १, २ र ३ का विभिन्न जिल्लामा गरी १९ जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा चार, खोटाङमा तीन, भोजपुर र काभ्रेमा दुई–दुई, इलाम, ओखलढुंगा, पर्सा, झापा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर र धादिङमा एक–एकजनाको मृत्यु भएको हो ।
नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रवक्ता एसपी रमेश थापाका अनुसार बाढीपहिरोमा परी आठ जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै बाढीपहिरोमा परी सयौं घाइते भएका छन् भने हजारौं विस्थापित भएका छन्। पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा यातायात अवरुद्ध भएको छ। तराई विभिन्न जिल्ला र राजधानीका केही ठाउँ डुबानमा पर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ।
अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकामा चार जनाको मृत्यु भएको छ। तीनजनाको टहरोले किचेर र एकजनाको पहिरोमा पुरिएर निधन भएको हो। काठमाडौं मूलपानीस्थित बाबाचोकमा टहरालाई पर्खालले थिच्दा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा बारा घर भई मूलपानी बस्दै आएका ३५ वर्षीया शर्मिला यादव, १० वर्षीय छोरा कुन्दन यादव र शर्मिलाकी देवरानी ३० वर्षीया निलु यादवको मृत्यु भएको हो। प्रहरीले एक्जाभेटर लगाएर टहरा पन्छाउँदा तीन जनाको शव भेटिएको थियो। यस्तै घर भत्किँदा ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको बगुवामा १३ वर्षका सरोज जिम्बाको मृत्यु भएको छ।
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–३ नालामा पहिरोले पुरिँदा २ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले पुरिँदा स्थानीय रामप्रसाद दंगालकी पत्नी ५५ वर्षीया गोमा दंगाल र सात वर्षीया नातिनी सोहनी दंगालको मृत्यु भएको काभ्रेका प्रहरी प्रमुख एसपी जयराज सापकोटाले बताउनु भयो। घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिँदा घाइते भएका ३ जनाको उपचार भइरहेको छ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा खोलाले बगाउँदा स्थानीय शिवराम बलामीकी १४ वर्षीया छोरी सन्तमाया बलामीको मृत्यु भएको छ। खोलाले बगाएर घाइते भएकी उनको उपचारका क्रममा पालुङस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मृत्यु भएको हो।
प्रहरीका अनुसार राजधानीमा विष्णुमती खोलाले बल्खुमा एक जना बगाएको छ। उनी अझै फेला परेका छैनन्। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका–५ कालीखोलामा आएको पहिरोमा परी तारामाया पाख्रिन बेपत्ता भएकी छिन्। ललितपुरकै भट्टेडाँडामा गुडिरहेको गाडीमाथि ढुंगाले थिच्दा ३५ वर्षीय दीपक घले घाइते भएका छन्। घले चढेको बा ४ ख ८६४ नम्बरको गाडीमाथि ढुंगा बजारिएको थियो।
कवि उदय निरौला । प्रशान्त !तिम्रो काखको अष्ट्रेलिया भेट्न म कसरी अाइपुगेँ, यो पनि गजवकै संयोग छ।म विदेश […]
संविधानबारे डा. बाबुराम भट्टराईको यस्तो टिप्पणी
काठमाडौं, एमाओवादी छाडेर नयाँ शक्ति अभियानमा लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई संविधान रोगले […]
कम्बाइन हार्भेष्टरको प्रयोगले कृषकको समय र श्रमको वचत
वीरगन्ज,नँया यान्त्रिक प्रविधिको सहायताले कृषि उत्पादनका लागि प्रसिद्ध मानिएका मध्य तराईका बारा, पर्सा र […]
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७२ सालमा सञ्चालित कानुन […]
काठमाडौं । निरन्तर वर्षाको कारण तिब्बतको खासास्थित केरुङ च्छो ताल फुट्ने जोखिम उच्च रहेको छ । जोखिमलाइ […]
बालुवाटार जग्गा प्रकरण : अख्तियारका पूर्वकर्मचारी नै फरार
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भूमिका खेलेको आरोप लागेका अख्तियार […]